बडादसैंमा सन्देश चेतनाको
मुलुक यतिखेर चाडमय भएको छ । बडादशैंको चहलपहलले सबैतिर भ्याइनभ्याई छ । विदेशिएकाहरू स्वदेशतिर र टाढा भएकाहरू घरतिर लम्किरहेका छन् । एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान हुन थालेका छन् । सुख, शान्ति र समृद्धिको कामनाले सामाजिक सद्भाव छरिरहेको छ ।
चाडबाडका बेलामा शुभकामना व्यक्त गर्नु यहाँको परम्परागत वैशिष्ट्य नै हो । शुभकामना सार्थक हुने लक्षण नदेखिनु चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ । हुन त पोहोर सालको जस्तो अन्योल, अनिश्चिता र आशङ्का अहिले छैन । संवैधानिक सीमाभित्र सबैखाले चुनाव निर्विघ्न सम्पन्न हुनेमा शङ्कै थियो तर राजनीतिक दलबीचको सुझबुझ तथा सहकारिताले स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न हुनपुग्यो । संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलसमेत निर्वाचनमा सहभागी रहनुले सुखद सन्देश पनि दियो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै लामो समयदेखि रहँदै आएको सङ्क्रमणकाल पनि बिदाबारी भयो भने नयाँ राज्य प्रणाली अनुरूप मुलुक सञ्चालन हुन थाल्यो ।
केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको ठाउँमा सङ्घात्मकताको मर्म अनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । केन्द्र अर्थात् सङ्घमा दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार छ । गणितीय हिसाबमा अहिलेको जस्तो सुदृढ सरकार मुलुकमा कहिल्यै थिएन । नौ महिने शासनकालमा नेकपा (एमाले)ले मनग्ये जनमुखी काम गर्न नपाएको धोको नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको साझेदारी र एकताबाट पूरा गरिने बाचा गरिंदा जनमन प्रफुल्लित भएकै हो । राजनीतिक स्थायित्व विना मुलुकले विकास गर्नै नसक्ने यथार्थलाई ध्यानमा राखी नागरिकले पनि खुला मनले मतदान गरेका कारण वाम एकताले राष्ट्रोत्थानका निम्ति स्वर्णिम अवसर प्राप्त ग¥यो ।
जनताले सरकारलाई निगरानी गर्न र दायाँबायाँ लागे सचेत, सजग गराउन ऐतिहासिक, ठूलो पार्टी नेपाली काङ्गे्रसलाई प्रतिपक्षको स्थानमा पु¥याए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै बाहुल्य रहनुले पनि मुलुकको कायापलट गराउने कार्यमा शुभअवसर जुटेको छ । मधेशकेन्द्रित दलको समेत सहभागिता र समर्थनले सङ्घीय सरकारलाई झन् बलियो बनाएको छ ।
यस अर्थमा यो बडादशैं झनै सुखद ठहरिनुपर्ने थियो तर त्यसो भइरहेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको अन्तद्र्वन्द्व, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रसको आन्तरिक रनाहा मात्रैले पनि होइन । अधिकारका नाममा प्रदेश र सङ्घबीच बढ्न थालेको चर्काचर्की अथवा सङ्घीयता चालु भएको आधा वर्ष नाघिसक्दा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन नबनेकाले मात्रै पनि होइन ।
यस्ता केही तìव छन्, जसले सबैथोक वितृष्ण तुल्याउन काम गरिरहेका छन् । सत्ताधारी दल मात्रै होइन, विपक्षी दलको पनि ओज नबढेको अवस्था छ । ‘यो पनि ठीक होइन, त्यो पनि ठीक होइन’ भन्नाले कोही ठीक नरहेको भाव मात्र प्रवाहित भइरहेको वस्तुगत यथार्थलाई सबै ठूला, साना दलले हृदयंगम गर्नैपर्ने भएको छ । दूधले नुहाएका नेता, दल कुनै नभएको यथार्थ रहे तापनि जनताले ठूलो आशा राखेर नयाँ व्यवस्थाका लागि चुनी पठाइएकाबाट फेरि उही विगतकै गलत पारा देखाइने हो भने प्रतिकूल परिणाम मात्र हात लाग्न सक्छ ।
खुकुरीले काट्छ भन्ने कुरो जान्न आफ्नै हात काटिरहनु पर्दैन तर हात काटिसकेकाले समेत फेरि खुकुरी नचाउन थालेपछि के हुन्छ ? नेपालमा बिरलै त्यस्ता राजनीतिक दल छन्, जसले आन्तरिक घात, प्रतिघातका कारण टुटफुटको शिकार हुन नपरेको होस्, टुट्दा के कस्ता असर र जुट्दा के कस्ता फलिफाप भए, नजान्ने कोही छैनन् । अन्तर्घातको असर अमूक राजनीतिक दलमाथि मात्रै परेन, मुलुक र खासगरी जनाकाङ्क्षाले अधिक नै बेहोर्नुपरेको कटु इतिहास छ । तैपनि, अहिले जे जस्ता पदचिन्ह देखिँदैछन्, पदचाप सुनिँदैछन्, तिनले केवल आशङ्का बढाइरहेका छन् ।
व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थको खेलले जसरी नेपाल र नेपालीको विगत बिग्रियो, वर्तमान नबिच्कियोस् र भविष्य नबिथोलियोस् भन्ने कामना बडादशैंका अवसरमा गरिनु पक्कै असुहाउँदो हुने छैन । असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाइने बडादशैं पर्वमा सत्य र असत्यको खोजी जरुरी बनेको छ । सत्यमेव जयतेको अर्थमा अवगाहन आवश्यक छ । बडादशैंका बेलामा नवरात्रिको विशेष महìव छ । नौ दिनसम्म हरेक दिन भगवती दुर्गाका अलग, अलग स्वरूपको आराधनाले लिन चाहनेलाई चाहिँदो ज्ञान प्राप्त भइरहेको छ । बडादशैंमा भगवती दुर्गाका नौ स्वरूपको विशेष पूजा, आराधना गरिन्छ । आदिशक्ति मानिने देवीको पूजाले शक्ति, सामथ्र्य र गलत प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ । देवीको आराधनाले क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा, चोरी जस्ता अवगुण हट्ने र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास छ । आसुरी प्रवृत्तिमाथि दैवी प्रवृत्ति विजयी हुने भएकाले पनि देवीको आराधना विशिष्ट छ । भगवतीले महिषासुरको बध गरे झैँ आराधक बाह्य शत्रु तथा भित्री शत्रुमाथि विजय हासिल गर्न समर्थ हुने भनाइ छ ।
मुलुकमा धमिलिन थालेको राजनीतिक वातावरणका पछाडि बाह्य शक्तिको खेल रहेको अनुमान गर्न नसकिने होइन तर केवल बाह्यशक्तिले मात्रै सधैंभरि रडाको मच्चाइरहेको हो त ? गम्नैपर्ने भएको छ । नेता, कार्यकर्ताको आफूभित्र रहेका शत्रुले पनि उत्ति नै अस्थिरता रोपिरहेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन । बडादशैंका बखत देवीको आराधना गरिँदा हरेकले बाहिरी तथा भित्री दुवै शत्रु पहिचान गरी तिनका विरुद्ध ऐक्यबद्ध भई लाग्नसकेमा मात्र सार्थकता हासिल हुने देखिन्छ ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः । ।
जुन देवी सबै प्राणीमा चेतना कहलाउँछिन्, उनलाई नमस्कार, उनलाई नमस्कार, उनलाई बारम्बार नमस्कार छ । यो ‘दुर्गासप्तशती चरित्र’को श्लोकले व्यक्तिमा रहेको चेतनालाई पनि भगवती दुर्गाकै अर्थात् शक्ति, सामथ्र्यको एक स्वरूप जनाइएको छ । बडादशैंका बखत हरेकले आफूभित्र रहेकी चेतनारूपी भगवतीलाई जगाउन कत्ति भूमिका खेल्न सक्छन्, यसैमा भविष्य निर्भर रहने देखिन्छ ।
फेरि पहिलेजस्तै सरकार हेरफेरको खेल थाल्न कसैलाई कुनो र कसैलाई दुनो जुटाउने क्रम चल्न लागेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । यसो हुँदा कुनै समूह दङ्ग पर्लान्, कुनै खिस्रिक्क, प्रतिपक्षी रमाउलान् र कतिले काखी बजाउने मौका पाउलान् तर यसले फेरि मुलुकलाई उही नियतिको शिकार बनाउनेछ । दलभित्रको आन्तरिक किचलो बढ्दै गएमा जे पनि हुनसक्छ तर त्यसले केवल राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्नेछ ।
अस्थिरताले मुलुकमा शान्ति हुन दिने छैन र विना शान्ति ‘विकास’ आकाशको चरोमा परिणत हुनेछ । विगतमा अन्य व्यवस्था बदनाम भए झैँ यो नयाँ व्यवस्था पनि कलिलै उमेरमा कलङ्कित बन्नेछ । यसो हुनु केवल कुनै नेताविशेष वा दलविशेषको मात्र दोषभागको पक्ष हुने छैन । जनान्दोलनका तमाम सहयात्री यसका मतियार ठहरिनेछन् । यत्ति छोटो समयमै किन अस्थिरताका तìव सलबलाइरहेका छन् ? किन दलभित्र तथा बाहिर विरोध र आलोचनाका छाल छचल्किरहेका छन् ? गम्भीर छलफल तथा विवेचना जरुरी छ । सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका के कस्ता कमी, कमजोरीले गर्दा चलखेलले मौका पाइरहेको हो ? समयमै घोत्लिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
आफैंभित्र त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउँदै बढ्नु बडादशैं पर्वको सन्देश हो भने शत्रु बाहिरको हो भने त्यसविरुद्ध जाइलाग्न एकताको शस्त्र अपरिहार्य छ । दीर्घकालीन योजना बुन्ने क्रममा जनता जनार्दनका तात्कालिक राहतका कार्य छुट्दै गइरहेको यथार्थलाई बिर्सनु हँुदैन ।